Tag: tantara instagram | Martech Zone
Tag: tantara instagram
Talata, Martsa 9, 2021 Talata, Martsa 9, 2021 Douglas Karr
Raha efa namokatra sy nandrakitra horonan-tsary tianao hampisehoana manerana ny media sosialy ianao, dia fantatrao fa ny ezaka takiana mba hijerena ny endrika horonan-tsary tsirairay mba hahazoana antoka fa mandray anjara amin'ilay sehatra nizarana ny horonan-tsarinao. Ity dia ohatra tsara iray izay ahafahan'ny faharanitan-tsaina artifisialy sy ny fianarana milina tena manisy fiovana. Kamua dia namorona tonian-dahatsary an-tserasera izay hamokatra ho azy ny horonantsarinao - ary mifantoka hatrany amin'ilay lohahevitra - manerana azy
Ahoana ny fomba hamoronana sary manaitra amin'ny tantara Instagram
Zoma, Septambra 18, 2020 Asabotsy, Septambra 19, 2020 Hardik Oza
Instagram dia manana mpampiasa maherin'ny 500 tapitrisa isan'andro, izay midika farafahakeliny ny antsasaky ny tobin'ny mpampiasa amin'ny ankapobeny ny Instagram na mamorona tantara isan'andro. Instagram Stories dia iray amin'ireo fomba tsara indrindra azonao ampiasaina hifandraisana amin'ny mpihaino kendrena anao noho ireo fiasa tsy mampino izay miova hatrany. Araka ny antontan'isa, 68 isanjaton'ny millennial no milaza fa mijery Instagram Stories izy ireo. Miaraka amin'ny isan'ny mpampiasa manaraka ny namana, olo-malaza,
Xara: Mamorona antontan-taratasy momba ny varotra maso amin'ny minitra
Sabotsy, Martsa 16, 2019 Zoma, Martsa 15, 2019 Douglas Karr
Tsy misy andro iray izay tsy niasako tao amin'ny Illustrator, Photoshop, ary InDesign ary diso fanantenana foana aho amin'ny tsy fisian'ny tsy fitoviana amin'ny fanolorana fitaovana tsirairay. Nahazo naoty avy amin'ny ekipa tao Xara aho herinandro lasa izay mba hitondra ny motera fanontana an-tserasera ho fizahan-toetra. Ary gaga be aho! Xara Cloud dia fitaovana famolavolana manan-tsaina vaovao novolavolaina ho an'ny tsy mpamorona endrika mamorona orinasa sy marketing ara-barotra sy matihanina
Ity misy lisitry ny ohatra amin'ny tantaran'ny Instagram sy ny fandalinana tranga
Alarobia, Oktobra 31, 2018 Asabotsy 13 Febroary 2021 Douglas Karr
Izahay dia nizara lahatsoratra teo aloha, Ny zavatra rehetra ilainao ho fantatra momba ny tantaran'ny Instagram, fa ahoana no ampiasan'ny marika azy ireo hitarika ny varotra sy ny varotra? Araka ny #Instagram, ny 1 amin'ny 3 amin'ireo Tantara be mpijery indrindra dia avy amin'ny orinasa Instagram Story Statistics: mpampiasa 300 tapitrisa mazoto mampiasa tantara isan'andro ao amin'ny Instagram. Maherin'ny 50% amin'ireo orinasa ao amin'ny Instagram no nanao tantara Instagram. Mpampiasa Instagram mihoatra ny 1/3 no mijery ny tantara Instagram isan'andro. 20% ny tantara
Hainao? Ny horonantsary mitsangana dia tsy mahazatra fotsiny fa mahomby kokoa
Zoma, Oktobra 12, 2018 Asabotsy 13 Febroary 2021 Douglas Karr
Taona vitsy lasa izay dia nanesoeso ampahibemaso ahy ny mpiara-miasa iray amin'ny Internet raha nizara ny hevitro tamin'ny alàlan'ny horonantsary aho. Ny olany amin'ireo lahatsariko? Notazoniko mitsangana ny telefaona fa tsy ny marindrano. Nametra-panontaniana izy momba ny fahaizako sy ny fijoroako eo amin'ny sehatry ny indostria mifototra amin'ny firaketana an-tsary. Nahagaga izany noho ny antony vitsivitsy: Ny horonan-tsary dia ny fahaizany mambabo sy mampita ny hafatra avokoa. Tsy mino aho fa misy fiantraikany ny orientation